Global Voices teny Malagasy » Ny [inoako] fa isika, ary ny zavatra [eritreretiko] fa [tsara indrindra] ataontsika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Aogositra 2018 6:43 GMT 1	 · Mpanoratra Laura Vidal Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Mediam-bahoaka, vondrom-piarahamonina, Blaogim-Piarahamonina GV, efitrano famoahambaovao, fijoroana vavolombelona
GVer mirehareha nandritra ny 10 taona aho. Nandritra izany fotoana izany, nanapa-kevitra aho ny hanao ny tantaram-piainako niaraka tamin'ny GV amin'ny maha-sehatra asa fototra azy, zavatra mila tafatafa sy fandinihana be, ary izay, araka ny fotoana ankehitriny, miteraka hevitra izay heveriko fa tsara hozaraina aminareo rehetra.
Tamin'ny fiafaran'ilay andro fandinihana, afaka aho nanolotra ny maha-isika antsika, ny zavatra ataontsika, ny zavatra iriantsika ary ny fomba iadiantsika manoloana vondrona mpikaroka avy amin'ny sekoly tranainy ao anatin'ireo rindrina mangatsikan'ny Akademia Frantsay. Tanjoko tamin'izany ny hampiseho ny zavatra azontsika ianarana avy amin'ity vondrom-piarahamonina ity, ny fomba hanomezan'ny fandehany tetika lehibe kokoa ho antsika momba ny fahitana ny tenantsika amin'ny alalan'ny kolontsaina hafa, ary ny fomba hahafahan'ny fampiasana aterineto manampy antsika hanorina fifandraisana lehibe.
Ny loza mety hitranga maharary amin'ny fihinjirana ao anatin'ny laingo 
Nasehon'ity asa fandinihana lava be ity fa mahery ny fahafahana manova, tsy ho an'ny fivelomana irery ihany fa ho an'ny fahombiazana ihany koa. Ity no zavatra voaraiko mikasika ny hoe iza isika sy inona no ataontsika, ary inona no afaka mitarika antsika mandritra ireo fotoam-piovàna ireo:
Knowmads  sy DJs isika
Sarotra tamintsika ny nahita ny toerantsika tao anatin'ity toerana be tabataba ity izay habaka ankehitriny misy ny vaovao iraisam-pirenena. Maniry ny hanenjika vaovao ny sasany amintsika, maniry ny hanazava zavatra ny sasany amintsika, maniry ny ho mpanentana mavitrika ny sasany amintsika. Efa im-betsaka isika no namerimberina fa mitantara tantara avy amin'ny haino aman-jerin'olontsotra isika, manana olana matotra isika mikasika ny hoe inona ny haino aman-jerin'olontsoitra, ary nanana resaka lava be mikasika ny hoe inona no tantaran'ny GV ary ahoana no niforonany. Izany rehetra izany tao anatin'ny fahitana toerana haino aman-jery mahazatra maro, ireo izay toa misongadina indrindra ankehitriny ao anatin'ny tontolo an-tambajotra, amin'ny fampiasana resak'olontsotra / sosialy / vaovao an-tambajotra.
Fa ao amin'ny tontolo toy izany, lavitra antsika ny ho toy ireo mpanao gazety mahazatra, na ireo bilaogera mahazatra, na ho fikambanana haino aman-jery mahazatra ihany koa. Mahafantatra sy tsy hahafantatra ny fifandraisantsika anaty sy ivelan'ilay vondrom-piarahamonina isika, mifolapolaka, miara-miasa, mamakivaky teknolojia isika; ary ireo rehetra ireo, tsy misy fetra ara-taona, ary matetika, tsy voafetran'ny teny. Samy ao anatin'izany avokoa, afangarontsika ny lahatsoratra, lahatsary, feo sy sary. Ny sasany amin'ireo tantarantsika dia fahanan'ireo hevitra avy amin'ny lahatsary Youtube, na fanehoankevitra ao amin'ny Youtube miaraka amin'ny fanadihadiana am-peo ao amin'ny SoundCloud. Nisy mihitsy aza lahatsoratra GV teraka avy amin'ny fifanakalozana tamin'ny imailaka!
Mitady tantara isika, ary manatanteraka izany amin'ny fanangonana sy fanambàrana loharano sy hevitra izay tsy ho nifankahita raha tsy mpamaky haino aman-jery mahay isika izay tsy manana fahasamihafana andrefy mba hanaovana tantara tsara. Eny, lasa mikorontana, ary amin'ny tranga maro, tsy mitombina ny tontolon'ny blaogy. Fa satria nipoaka ny habaky ny haino aman-jery ary nandalo fiovaovàna tsy ankijanona ireo loharanom-baovao. Raha toa ka lasa tsy dia loharanom-baovao mampitsiriritra intsony ny blaogy maro, nitsimoka kosa ny vondrom-piarahamonina sy ny haino aman-jery tsy miankina.
Raha ny amin'ny tranga ao Amerika Latina, noho ny fahafatesan'ny bilaogy no niteraka fomba an-tapitrisany fanaovana haino aman-jery tsy miankina, vondrom-piarahamonina kely mifandray amin'izao tontolo izao ary filazàna fa misy izy ireo, manana betsaka ho lazaina, ary mendrika ny ho henoin'ireo any ivelan'ny sisintaniny.
Manamboatra tetezana ary manao izay haha-olombelona isika.
Zavatra averimberiko matetika ity rehefa manatona ahy ny olona ka milaza amiko fa maniry ny hiditra ato amin'ny GV. Ary noho izany… Mpanao gazety ve isika? Tsia. Manoratra votoaty tsy nalain-tahaka ve isika? Indraindray. Mizara vaovao mafana ve isika? Manana… fa tokony ve? Inona ary izany no ataontsika? Araka ny zavatra hitako, manome ny fomba fijerin'olombelona amin'ny zava-miseho no zavatra tena tsara indrindra ataontsika.
Araka ny fahitako azy, mampifandray teboka maro isika. Manazava ireo olona ny zavatra mampiseho amintsika hoe vitantsika ny mahatakatra, ary izay no mahatonga antsika ho tonga saina fa misy ny fihavanana sy ny tsindrinentam-pahefana ary mitombo amin'ny fahafantarana fa tsy irery izy ireo.
Amin'izay fomba katritra mety hahenoana azy, tsy vitan'ny hoe azo atao fotsiny ny tontolo vaovao, fa efa an-dalana mihitsy.
Im-betsaka isika no niady hevitra mikasika ny tantarantsika, ireo mpamakintsika, ireo fitambaran'ny manontolo maro mandalo amintsika, ny fanjakan'ny teny Anglisy sy ny endri-javatra sy fomba fijery Tandrefana/Amerikana. Ireo no resaka mila mitohy foana, sarotra sy be pitsopitsony satria araka ny fiaviana sy ny fomba fifandraisantsika izy ireo. Fa na izany aza, mihevitra aho fa zava-dehibe ny fitadidiantsika ny mahatonga antsika ho maharesy lahatra, izay, raha ny hevitro manokana, tsy voatery hitaredretra any aorian'ny faribolan'ny vaovao.
Ny tena mahatonga antsika ho maharesy lahatra dia ny fizarana tsy tapaka ireo tantara, izay mamaky anelanelan'ireo tsipikana fifanolanana, izay mahita ny zava-niseho teo aloha na ny mety hitranga ao aoriana, izay mampifandray antsika amin'ny olona mitovy soatoavina sy hevitra amintsika, ary izay miezaka ny hamoaka ny marina sy ny hafatry ny maro izay mahatsiaro fa mihiaka ao anatin'ny haizina.
Tsy manoratra amina tranonkala fotsiny isika
Lasa azo atao daholo ireo eo ambony ireo noho ny olona avy aminà faravodilanitra maro. Notarihan'ny mpanao gazety isika, saingy vatsiana mpikaroka, mpikatroka, mpanao anjambany, mpahay teknolojia, ary mpamaky ny haino aman-jery ao anatina habaka andalam-pianarana sy am-pihetsehana lalandava isika. Tsy mahagaga raha efa ivon'ny asa fikarohana maro ny Global Voices ary dingana voalohany tamina làlana maro nankany amin'ny asa matihanina.
Ny kolontsaina hita ao amin'ity vondrom-piarahamonina ity no famantarana maro hita maso no mitambatra maneho ny zava-misy ary ireo pitsopitsony maro – izay ilaina mba hahafahana mamaky ny tontolo niainantsika nandritra ny taonjato maro, tontolo izay vao haingana vao fantatsika ny lokony.
Noho izany, tsy momba ireo tantara ao amin'ny tranonkala irery ihany izany. Resaka arahantsika izany -na dia ireo mahatezitra aza -. Manao fanentanana isika, mifampiresaka, manorina finamànana. Apetrantsika ny fifandraisaina amin'ireo mpanoratra izay adikantsika ny asany, amin'ireo blaogera sy mpanao gazety tononintsika. Ananantsika ny toerana ahafahantsika manangona fomba fiteny avy amin'ireo olona miaina amin'ny fomba maro samihafa ny halalin'ny maha-mora miovaova hevitra ity izao tontolo izao ity.
Porofo isika fa tena matanjaka ny sisintany, fanjakana firenena ary ny maha-izy, saingy vokatra sarotra sy be pitsony avy amin'ny fisainantsika ihany koa izy ireny.
Afaka ho lasa mpanao fanandramana sahisahy isika
Ny fanontaniana ankehitriny dia ny hoe… ahoana? Amiko, mazava be ary mbola mitempo ireo zavatra rehetra mampitambatra antsika.
Ny fanaovana azy ireo ao an-tsaina dia toy ny fitaovana iray fanoritana faribolana mahafinaritra mila hoentina raha toa ka manainga ny tongotra lehibe iombonantsika isika mba hanaovana dingana mankany aloha .
Vokatry ny asa fikarohako sy ny traikefako teto ireo tsipika sy hevitra ireo, fa ny tena zava-dehibe, tonga taorian'ireo fifamalianasa sy traikefam-pianarana azoko tamin'ny fiarahamiasan'olon-droa, i Sahar sy Lauren, nandritra ireo taona maro lasa izy ireny.
Ho an'izy roa ny fisaorako sy ny firariako ny tsara indrindra ao amin'ireo ezaka / andraikitra vaovao izay hampiasan'izy ireo ny majikany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/01/122991/
 Ny loza mety hitranga maharary amin'ny fihinjirana ao anatin'ny laingo : https://www.goodreads.com/quotes/2846-and-the-day-came-when-the-risk-to-remain-tight